Hamro Yatra | » कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु, तीन महिनामा सबैलाई खोप लगाइन्छ – प्रधानमन्त्री ओली कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु, तीन महिनामा सबैलाई खोप लगाइन्छ – प्रधानमन्त्री ओली – Hamro Yatra
> कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु, तीन महिनामा सबैलाई खोप लगाइन्छ – प्रधानमन्त्री ओली
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु, तीन महिनामा सबैलाई खोप लगाइन्छ – प्रधानमन्त्री ओली
१४ माघ, काठमाडौँ । आजदेखि देशभर कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
अभियान उद्घाटनलगत्तै नेपालमा कोरोनाको पहिलो खोप काठमाडौंको टेकुस्थित शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाएका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप सुरक्षित रहेको सन्देश दिन पहिलो खोप आफुले लगाएको डा. राजभण्डारीले बताएका छन् ।
खोपको पहिलो दिन १२ हजार जनालाई खोप लगाइने स्वास्थ्यमन्त्री हृदेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् । पहिलो चरणको खोप अभियान १० दिनमा सकिने मन्त्री त्रिपाठीले बताएका छन् ।
तीन महिनामा सबैले खोप पाउछन् – प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै कोरोनाविरुद्धको लडाईमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । यस अभियानमा देशभरका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर कोरोनाविरुद्धको लडाईमा खेलेको भूमिकाका लागि प्रसंशा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीले अप्रत्याशित रुपमा ज्यान लिएको प्रति दुख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारहरुलाई समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले अब सबै मानिसहरु सतर्क रहेकाले पहिला जस्तो गरेर कोरोना नफैलिने बताए । मानिसहरुले सतर्कता अपनाउदै आएकोले पहिला जस्तो महामारीको अवस्था नआउने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खोप प्राप्त भएपनि कोरोनाबाट बच्ने उपाय भने अपनाउदै जानुपर्ने बताए । उनले पूर्ण रुपमा कोरोना नियन्त्रण नभएसम्म मास्क लगाउने हात धुने र सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको खोप उपलब्ध गराएकोमा भारत, भारतीय जनता र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिएका थिए ।
उनले अन्य संघ संस्थाहरुसँग पनि कुरा भइरहेको र भारत सरकारसँग थप खोप किन्ने विषयमा कुरा भइरहेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले थप खोप उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा क्षति कम भएको बताउदै पहिलो कोरोनाको केस देखिदा परिक्षण गर्ने ठाउ नभएकोमा अहिले ८२ ठाउबाट कोरोनाको परिक्षण भइरहेको बताए ।
उनले आगामी तीन महिनाभित्र सबैलाई खोप लगाएर सकिने गरि सकरार अगाडी बढिरहेको बताए ।
खोप केन्द्र :
काठमाडौँ उपत्यकामा १७ अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका निर्देशक डा झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौँमा १२, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा दुई अस्पतालमा खोप केन्द्र रहने छन् । काठमाडौँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, काठमाडौंँ मेडिकल कलेज जोरपाटी, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी बलम्बु अस्पताल, शहीद गङ्गालाल अस्पताललगायत छन् । ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, किष्ट मेडिकल कलेज र आनन्द वन अस्पतालमा खोप केन्द्र रहने छन् ।
नेपालमा अहिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दुई लाख ७० हजार ९२ जनामा देखिएको छ । सङ्क्रमणबाट दुई हजार १७ जनाको निधन भइसकेको छ ।
कस्तो असर हुनसक्छ ?
स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका निर्देशक डा झलक शर्मा गौतमले ०.५ मिलीलिटर (मिली) मात्रा खोप प्रदान गरिने जानकारी दिए । त्यसपछि पहिलो खोप लगाएको चार हप्तापछि अर्को मात्राको खोप दिइने छ । खोप देव्रे पाखुराको माथिल्लो बाहिरी भागमा ९० डिग्री कोण बनाएर (मासुभित्र) दिइने छ ।
खोप ज्वरो आएको वा कोभिड–१९ को लक्षण भएका वा अन्य सक्रिय सङ्क्रमण भएका अवस्थामा र गर्भवती वा सुत्केरी पहिलो खोप लगाउँदा एनाफाइलेक्सिस भएका दोस्रो मात्र नदिने गर्नुपर्दछ ।